Somali / Macluumaad Muhiim ah oo ku saabsan Fursadaha Waxbarashada ee Sanad Dugsiyeedka Dambe
Macluumaad Muhiim ah oo ku saabsan Fursadaha Waxbarashada ee Sanad Dugsiyeedka Dambe
Wargalin muhiimka ah oo ka Socota Iskoolada Cherry Creek
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qorshaynta sannad dugsiyeedka soo socda
Farriin muhiim ah oo ku saabsan caqabadaha miisaaniyada CCSD
Akhbaar muhiim ah oo ku saabsan sanad dugsiyeedka soo socda
Macluumaad Muhiim ah oo ku saabsan qalin-jabinta 2020 (Graduation)
Wargalin ku saabsan Waxbarshada fasalka dhexdiisa ee loogu talagalay PreK-12 (In-Person Learning)
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Saraakiisha Macluumaadka Hawlaha ee iskoolka (SRO)
Soo-bandhig ku saabsan Caqabadaha Maaliyadeed ee Soo food-saaray Iskoolada Cherry Creek (Budget Vid)
Wargalinta miisaaniyadda ee ku saabsan doorashada iyo maalmaha fasaxgalinta (Budget Furlough)
Waraaqda Soo-dhaweynta ee Kormeeraha Guud(Welcome Back)
Salaan. Anigu waxaan ahay Scott Siegfried, kormeeraha guud ee iskoolada Cherry Creek.
Iyada oo fasaxii xagaaga-summerka uu soo socdo, waxaan xooga saaraynaa sii-diyaarinta bilowga dugsiyada ee August. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan geedi socodka qorshaheena iyo qaababka waxbarasho ee aan diyaarineyno si aan uga jawaabno saameynta uu COVID-19 ku leedahay deyrta-fall.
Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta ku saabsan qorsheena halkan www.cherrycreekschools.org/PlanningForward. Websaydkan waxaa loogu tala galay in lagu wargaliyo bulshada Iskoolada cherry Creek inay la socdaan hawlaha socda bilaha xagaaga-summerka iyo isu diyaarinta dib u bilaabida iskoolada bisha August.
Si aad ugu tarjumato websaydka Qorsheynta mustaqbalka, ka xulo luqadaha liiska tarjumaada ee barta madow. Fadlan la xiriir Omar Nur cinwaanka Emaylka-onur2@cherrycreekschools.org si aad u heshid macluumaad ku qoran luqadaada.
Sida had iyo jeer, waxaan ku bilaabanaa qiimaheena, himilooyinkeena mustaqbalka iyo si aan u hubinno heerka sare ee tacliinta iyo caafimaadka, badbaadada iyo wanaaga ardayda, shaqaalaha iyo bulshada.
Aan ku bilaabo aniga oo leh, ula jeedadeenu waa inaan soo celino wax-barashadii foolka-ka foolka ahayd illaa inta ugu badan ee suurogal ah anagoo u hogaansan Waaxda Waxbarashada ee Colorado iyo shuruudaha waaxda caafimaadka. Waqtigaan shuruudaha waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin kala-fogaanshaha bulshada ee xaga jirka, xirashada maaskarada iyo hubinta heerka xaraarada ee qofka. Rajadeenu waa inaan war cad ka helo Gobolka sida ugu dhaqsaha badan si aan ugu diyaar garowno waxbarashada waalidiintana ula socdsiino. Tacliintu aad ayey muhiim u tahay in la sugo ilaa waqtiga ugu dambeeya si loo qorsheeyo.
Dugsiyada Cherry Creek, sidaa darteed, waxaan horay ugu soconeynaa in aan abuurnno fursado macquul ah oo loogu diyaar garoobayo go'aanada kama dambeysta ah ee ka soo baxa Gobolka. Waxaan si taxaddar leh isugu diyaarin doonaa go'aan kasta oo ugu dambeynta la gaaro.
Si aan u hago howsheena, waxaan abaabulay koox hawleed ka kooban maamuleyaal, macalimiin, waalidiin iyo arday ka kala socota dhamaan degmooyinka dugsiyada oo yeeshay kulan socday in ka badan bil , soo saaraya qorshayaal lagu hirgalinayo heerka sare ee waxbarashadda inta lagu jiro xaaladahan adag.
Iyada oo ku saleysan xayiraada caafimaad ee dadweynaha ee hada jirta, iskoolada in qaabkii hore wax loogu barto way adkaaneysaa. Waxaan diyaarinay laba fursadood oo dugsiyada loogu talagalay in qoysasku deyrta ay kala doortaan deyrta-fall: kuwaas oo kala ah- khadka tooska ee internetka laga bilabo K-ilaa 12naad iyo isku jirka fasalada ee dugsiga dhexe iyo ka sare. Waxaan isku dayeynaa inaan qorshe u sameeyno sidii loo yareyn lahaa in ardayda dugsiyada hoose in ay fasalada isugu yimaadaan maalin kasta iyadoo la tixgalinayo cadadka ardayda fasalada mar wada dhigan karta.
Qoysaska aan dooneyn inay ubadkooda ay u diraan dugsiga dayrta-fall sababtoo ah COVID-19 ama sabab kale yaa dooran kara Iskoolka Internetka oo buuxa. Waxaan u fidin doonaa Dugsiga Hoose ee internetka ardayda fasalada K-ilaa 5aad iyo Cherry Creek Elevation ee ardayda dugsiga dhexe ama sare.
Dugsiga Hoose ee internetka wuxuu bixin doonaa manhaj iyo fursado waxbarasho oo la mid ah dusiyada hoose ee kale. Qorshahan wuxuu u ogolaanayaa macalinka fasalka ee Iskoolada cherry Creek inuu gabi ahaanba la shaqeeyo ama wax u dhigo arday kasta shan maalmood usbuucii.
Dugsiga Elevation ee cherry Creek waa dugsi toos ah xaga internetka oo si rasmi ah loo aqoonsan yahay oo leh koorsooyin aad u tiro badan oo adag kuwaas oo la kulma shuruudaha koorsooyinka ee CCSD iyo heerarka laga heli karo dugsi kasta oo degmada ku yaal. Dugsigan Elevation yaa la furay sanadkii hore oo ahaa dugsi sare oo internetka ah waxayna la rajeynayaa inuu yeesho dugsiga dhexe sanadka soo socda.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Iskoolada internedka ee tooska ah bogeena internetka.
Hada, fursada Wax Barashada fool ka-foolka ah. Waxaan siin doonaa barnaamij waxbarasho isku-dhafan oo loogu talagalay qoysaska jecel in caruurtoodu ay ku laabtaan dugsiyada sida ugu haboon ee suurtogalka ah iyada oo la ilaalinayo amarada caafimaadka bulshada.
Sidii aan horey idinku soo sheegay, si aan ugu hogaansanaano shuruudaha kala-fogaanshaha bulshada ee jirka ee ardayda iyo shaqaalaha, waxaan kari karnaa oo kaliya in kala bar ay ardaydeenu iskoolada aadaan maalin walba.Nidaamkan wuxuu hada loo isticmaala oo kaliya dugsiyada dhexe iyo kuwa sare.
Ardaydu waxay aadi doonaan dugsiga habka waxbarashada ee uu macalinku wax u dhigayo laba maalmood usbuucii sedexda maalmood ee kalana waxey wax ku baran doonaan guriga. Ardayda yaa loo qaybin doonaa laba qaybood oo ku saleysan magacooda dambe-last-name waxaana lagula xisaabtami doonaa waxbarashadan cusub buundooyinkana waa la tirin doonaa sanadka oo dhan.
Waqti kasta inta lagu gudajiro waxbarashada isku dhafan, dhamaan ardayda dugsiyada ama guud ahaan degmada waxaa la amri karaa inay ku laabtaan waxbarashada buuxda ee internetka ee fog mudo ah todobaadyo ama bilo ah sababtoo ah hadii heerarka faafitaanka caabuqa koroonaha-COVID-19 uu kordho. Macalimiintu waxay diyaar u noqon doonaan inay markiiba badalaan waxbarashadii fasalka wax lagu baranayay una wareegaan waxbarashada internetka iyadoo aan wax dib-u-dhac ah imaan waxbarashadiina aaney hoos u dhicin.
Iskooladuna waxay sidoo kale lahaan doonaan talaabooyin caafimaad iyo badbaado cusub si loo ilaaliyo ardayda iyo shaqaalaha. Daboolida afka ama wejiga waa in wax lagu xirtaa inta la joogo dugsiga. Fasalada dib yaa loo habeyn doonaa si miisaska loo kala fogeeyo. Dhamaan ardayda iyo shaqaalahana waxay mari doonaan baadhitaan caafimaad oo heerka kulaylka jirkooda iyo hubin astaamo markay yimaadaan dugsiga.
Inta lagu jiro maalinta, ardayda iyo shaqaaluhu waxay heli doonaan nasashooyin isdaba joog ah si ay gacmaha u dhaqaan. Iskooladana waa la nadiifin doonaa habeen kasta.
Waxaa kaloo muhiim ah in qof kasta oo aan caafimaad qabin ama muujiya calaamadaha jiro sida astaamaha hargabka ama heerkulka kacsan uu guriga joogo.
Talaabooyinkani waxay ku saleysan yihiin shuruudaha waaxda caafimaadka waxaana loo habeeyay si loo hubiyo inaan sida ugu wanaagsan aan u caawino ardayda iyo shaqaalaha inay caafimaad qabaan . Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan talaabooyinkan caafimaad, iyo sidoo kale macluumaadka jadwalka barashada Isku-dhafan, bogeena internetka.
Mar labaad, waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad booqataan bogeena Qorsheynta mustaqbalka ee websaydka degmada si aad wax uga ogaataan waxyaabaha ku saabsan xulashooyinka fursadaha sanadka soo socda ka dibna aad isticmaashaan sahamintan aan ugu talo-galnay si aan uga helno fikradaha xulashooyinka fursadaha ay qoysasku ay u dooran karaan caruurtooda.Waxaad halkan ka gali kartaa si aad u samayso sahankan gaaban ee ku saabsan fursadaha waxbarasho ee sanadka dambe.
Waan idinla soo socod siin doonnaa wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qorshayaasha sanadka soo socda inta lagu jiro xaaaga-summerka oo dhan. Hadii xaaladaha la xiriira COVID-19 ay kor u kacaan ama si weyn hoos ugu dhacaan xagaaga-summerka ama hay'adaha caafimaadku ay bedelaan xayiraada, waan cusbooneysiin doonnaa qorshayaasha, waxii suurtagal ah .
In ka badan wax kasta, waxaan rajeyneynaa in ardaydu ay ku soo noqdaan fasaladeena dayrta-fall soo socota. Ma sugi karno si aan uga caawino inay wax bartaan oo aqoontoodu kor u kacdo oo ay xasuus cusub la sameeyaan asxaabtooda fasalka iyo macalimiintooda.
Si wada jir ah, sanadka soo socda waxaan ka dhigi karnaa mid wanaagsan.
Fadlan samee sahankan gaaban ee ku saabsan fursadaha waxbarasho ee sanad dugsiyeedka 20-21 halkaan.
Last Modified on June 5, 2020